Akụkọ - Gini bụ igbe ọgwụ
Plastic Medical igbe (na-akpọ ọgwụ na igbe) ma ọ bụ plastic ọgwụ igbe, na-eji ọtụtụ n'ụlọ ọgwụ na ezinụlọ. Enwere ike iji ya maka ịchekwa ọgwụ, ngwaọrụ ahụike ma ọ bụ buru ha maka ịhụ ndị ọrịa.
Igbe ọgwụ, dị ka aha ya na-egosi, bụ akpa maka ịchekwa ọgwụ na akụrụngwa ahụike, nke enwere ike ịpụ ma jiri ya mee ihe n'ọnọdụ nke ọnọdụ. N'iji ya tụnyere ihe gbasara ahụike, igbe ahụike nwere olu buru ibu na ikike ka ukwuu, nke nwere ike ịchekwa ọtụtụ ihe. Ngwaọrụ ahụike nwere ike ịchekwa ihe mberede maka iji otu oge. Igbe ọgwụ dị iche iche n’ihi na ha na-echekwa ọtụtụ ihe n’ihi nnukwu ha.
Nhazi ọkwa nke igbe ọgwụ plastic
Nkesa site na iji
1.Family Nchekwa igbe igbe
2. Ndị dọkịta na-ebu ngwa ngwa ahụ ike
3. Ihe enyemaka mbụ
4. Igbe nchekwa ọgwụ na ụlọ ọgwụ
5.A nwere ọgụgụ isi na nkà mmụta ọgwụ igbe
6.Desktop igbe igbe
7.Emezu na-eji igbe ahụike
8. igbe ọgwụ na-akpaghị aka
Nhazi site na udiri na nhazi
1.Simple igbe ahụike
2.Micichamber igbe ọgwụ
3. Multidrawer igbe ọgwụ
4.Reinforcement igbe ọgwụ
5. Nnukwu igbe nchekwa ọgwụ
Igbe ahụike ezinụlọ maka ihe enyemaka mbụ
Ndị dọkịta na-ebu ngwongwo onwe ha
Multidrawer & Multichamber igbe ọgwụ
Igbe ahụike dị mfe
Ọgụgụ ọgụgụ isi igbe igbe ọgwụ na-akpaghị aka
Desktop ọgwụ igbe
Comprehensive na-eji ọgwụ na ahụ ike
Igbe nchekwa ọgwụ na ụlọ ọgwụ
Kedu ihe plastik eji eme akụkụ nke igbe ọgwụ?
N’ụlọ ọgwụ, a na-ejikọ ngalaba ma ọ bụ otu ụdị ọgwụ na ngwa ọrụ n'otu ngwugwu pụrụ iche.
Nke a na ụdị nke zuru ezu nke ọgwụ bụ ofu na nkewa. A na-akpọ ya igbe ahụike.
Ewezuga igbe ahụike ejiri n'ọgbọ agha ma ọ bụ ọnọdụ dị elu na nrụgide dị elu pụrụ iche, ọtụtụ igbe igbe ahụike ndị ọzọ bụ nke ịkpụzi plastik. Iji maa atụ: igbe ọgwụ n’ụlọ ọgwụ, igbe ọgwụ a na-agwọ n’ụlọ, igbe ọgwụ enyemaka mbụ na ihe ndị ọzọ.
Ihe plastik anyị na-ejikarị eme igbe igbe bụ PP, ABS, PC.
Eyi ike igbe atụmatụ: nnukwu ikike, ìhè arọ, ala mmepụta na-eri na nnukwu quantities, nwere ike ịnabata nchekwa nke dị iche iche ọgwụ, mmiri-àmà, mgbochi cross-ekpomeekpo. O kwesịrị ekwesị maka nchekwa ọgwụ ọgwụ ezinụlọ na ụlọ ọgwụ.
Dịka mkpa ojiji si dị, a na-eji plastik ma ọ bụ akụkụ ọla ndị ọzọ iji dakọtara na igbe igbe PP iji mee ka ọ dịkwuo ike ma ọ bụ nyekwuo ọrụ igbe ahụ.
Dabere na ndị ọrụ, gburugburu ebe obibi na nchekwa ọgwụ ma ọ bụ ngwaọrụ ahụike, igbe ọgwụ nwere ọtụtụ ụdị, nha na akụkụ dị n'ime.
Kedu akụkụ Plastic dị na igbe ọgwụ?
Igbe ọgwụ na-agụnyekarị akụkụ plastik tumadi gụnyere akụkụ plastik ndị a
1. Top mkpuchi
3. Esịtidem Es, igbe igbe
Ọgwụ na ịkpụzi Technology na Atụmatụ maka plastic igbe ọgwụ mmiri
1. N'ozuzu, nha igbe ọgwụ dị mfe pere mpe, usoro ya dịkwa mfe. Ihe mkpuchi elu, igbe igbe na akụkụ dị n'ime ya nwere ike ịkpụ PP.
2. Maka akụkụ mpụga nke igbe ọgwụ multifunctional nwere usoro dị mgbagwoju anya, a na-ejikarị ABS na ihe PC nwere oke siri ike.
3. Mgbe ụfọdụ, a na-agbakwunye akụkụ aluminium iji mee ka akụkụ na nkuku nke igbe ọgwụ dị ike na-agbakwunye mgbe ụfọdụ.
4. Ihe omimi nke ọkpọ ọgwụ dị obere, ọ nweghịkwa nkwado zuru oke n'ime igbe ahụ. ABS ma ọ bụ PC ihe dị mkpa.
5. Ihe eji eme ihe kwesiri iju ROHS ma obu FDA. Nchekwa na ojiji nke ihe kwesiri idi iche na ihe ndi ozo.
6. Igwe ogwu na gburugburu ebe obibi kwesiri idi ocha ma dozie ya.
Ngwakọta ahụike nwere ahịa buru ibu, nrụpụta ya ga-agbaso ụfọdụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Mestech ụlọ ọrụ na-eme ka plastic ebu na mmepụta maka omenala plastic ọgwụ igbe.Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.